I-Villa Peltoranta - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJukka
UJukka ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Isakhiwo esihle se-villa esigqitywe ngo-2019 kunye nendlu esemaphandleni ye-sauna ezimeleyo kwindawo ethe cwaka ngakwichibi Inqaku e-Iit. Le ndlu inamagumbi okulala amabini, ikhitshi lale mihla (isitovu esisebenza nge-induction, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji) negumbi lokuhlambela elitofotofo/indlu yangasese. Wamkelekile ngokufudumeleyo!
Indlu entle enendawo yokuphola eyakhiwe ngo-2019 kunye nesauna eyahlukileyo kwindawo epholileyo ecaleni kwechibi. Le ndlu inamagumbi okulala amabini kunye nekhitshi lale mihla kunye negumbi lokuhlambela. Ukwamkelwa ngokufudumeleyo!
Imizuzu eyi-20 ukuya kweyi-30 xa uhamba ngemoto usiya kwiilali/izixeko ezikufutshane (iKausala, iKuusankoski, iKouvola, iJaala) apho unokufumana iivenkile zokutya nezinye iinkonzo. Isixeko esikhulu esikufutshane Le ndawo ikude ngemizuzu eyi-45 ngemoto.
Ukukhwela imoto imizuzu eyi-20 ukuya kwiidolophu ezikufutshane (iKausala, iKusankoski, iKouvola, iJaala) kunye neevenkile zokutya kunye nezinye iinkonzo. Eyona dolophu inkulu ikufutshane yi-Bay yimizuzu eyi-45 yokuhamba ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Jukka
Ndiza kufumaneka ngefowuni ngalo lonke ixesha lokuhlala
kwam Ungandifowunela ngefowuni ebudeni bexesha oza kulihlala